ओली–माधव झगडाको अन्तर्य
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेताबीचको झगडा नयाँ विषय होइन । आपसमा लगाउने आरोप त सामान्य भइसकेको छ ।
अलिकति कुरा नमिल्नेबित्तिकै गम्भीर आरोप लगाउने कम्युनिस्ट प्रवृत्ति हो । मोहनविक्रमले पुष्पलाललाई ‘गद्दार’ भन्न कति पनि अप्ठ्यारो मानेनन् ।
निर्मल लामा जस्तो सादगी नेतालाई दरबारको सिआइडीको आरोप पनि गाइँगुइँ सुनिएकै हो । तर यी आरोप प्रत्यारोपभित्र ‘वादको पच्छ्यौरा’ वा ‘विचारको बर्काे’ ओडिन्थ्यो । माक्र्स, लेनिन, माओत्सेतुंगको हवाला दिइन्थ्यो ।
तर अहिले पछिल्लोपटक ओली र माधवको विवाद भने सर्वथा नयाँ प्रकृतिको भयो । कुनै सैद्धान्तिक बर्काे पनि ओडिएन । विगतमा सैद्धान्तिक बर्काे ओडाउने चलनलाई पनि तोडिदिए, केपी–माधवले ।
माधवले दिएको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि ओलीले स्वीकार गर्न सकेनन् । झगडा ‘तँ त र म म’मा गरेर झगडा गरे । यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलै संकेत गर्दछ । किन यो स्तरको झगडा भयो ? र यो स्तरको झगडाले भावी कम्युनिस्ट पार्टीको बाटो कस्तो होला ? गम्भीर प्रश्न हो ।
सुरुमा झगडा हुनुको कारण खोतल्दा यो विश्लेषण गर्न सकिन्छ कि, ओली स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश जाँदा प्रचण्डलाई अध्यक्ष स्वीकार गरेको देखियो । प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिँदै पार्टीको कार्यकारी अधिकार सुम्पेको पनि सुनाउँदै आफूबेगरको निर्णय नगर्न र टेलिफोन मै भएपनि सहमति निर्माण गर्न सुझाव दिए ओलीले ।
ओलीको एकोहोरो कुरा सुनिरहेका माधव नेपाल नराम्ररी चिडिए । नेपाललाई आफ्नो ठाउँ नभएको अनुभूति भयो । उनलाई राम्ररी थाहा छ कि, पार्टी सत्ता के हो ? सिंहदरबारको सत्ता के हो ? दुवै सत्ताबाट बाहिर परेको बेला प्रचण्ड र ओलीको संवाद उनलाई मन परेन । उनी एकाएक जंगिए ।
सत्ताको स्वाद नपाउनु एउटा कुरा हो । तर सत्ताको स्वाद पाउनु र सत्तामा बस्न नपाउनु जस्तो पीडा सम्भवतः अर्काे हुँदैन होला । माधव नेपालको त्यही पीडा बोलेको हो तर असभ्यताको ढाँचाभित्र । त्यस्तो असभ्यतालाई ओलीले अर्काे असभ्यताले मिचे ।
भर्खरै मर्यादाक्रम हेरफेर भएको पीडामा प्रचण्ड र ओलीको संवाद माधवका लागि थप पीडादायक र असह्य थियो । यहीं झोकमा उनले फरक मत पनि औपचारिक रुपमा दर्ता गरेका छन् ।
तर फरक मतमा उनले सांगठनिक प्रक्रिया, विधिका विषय उठाएका छन्, जुन कुरा उनले उठाउनु पर्ने थियो । तर कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्ने कार्यदिशा के हो ? तत्कालीन कार्यनीति कस्तो हुनुपर्ने ? दीर्घकालीन सैद्धान्तिक बाटो कस्तो हुनुपर्ने ? जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवादले अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीको दायित्वबोध गर्छ कि गर्दैन ? जस्ता विषय उनको फरक मतमा कहीं छैनन् ।
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचार र सांगठनिक प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो छ । तर उनले आफू संगठनको तरवारले हानेको घाउले दुखिरहेको बेला आफ्नै घाउमात्रै उठाए । सिंगो कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र कार्यदिशाको कुरा उठाएनन् ।
एक ढंगले भन्ने हो भने माधव नेपालले उठाएको कुरा बृहद् राजनीतिक सन्दर्भमा कुरा गर्दा महत्वको त हो तर त्यो भन्दा महत्वको कुरा वैचारिक हो । तर त्यो वैचारिक विषयमा प्रवेश नगर्नुका पछाडिले उनको प्रवृत्ति बुझ्न सकिन्छ ।
माधव–ओली झगडा प्रकरणबाट बुझ्न सकिन्छ कि, कम्युनिस्टलाई झगडा गन सिद्धान्तको सहारा लिनु पर्दैन । यसअर्थमा सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने वातावरण बनेको छ र यस्ता झगडाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सैद्धान्तिक बहस कम हुने प्रचलनलाई प्रर्वद्धन गर्दैछ ।
गुटैगुटले थिलिएको कम्युनिस्ट पार्टीमा झगडा स्वभाविक हो । तर यो स्तरको झगडालाई भने स्वभाविक भन्न सकिँदैन । जब निरन्तर पार्टी मर्दछ र गुटहरु मौलाउँछन् त्यसले अस्वस्थ बहसलाई नै भित्र्याउँछ ।
अहिले पनि पार्टी त नाम मात्रकै हो, बरु गुटहरुको महासंघ न हो । गुटहरुभित्र विचार भन्दा व्यक्ति हुन्छ । व्यक्तिका स्वार्थहरु हुन्छन् । व्यक्तिका इगोहरु हुन्छन् । मुख्यतया गुटमा साझा लक्ष्य, उद्देश्य भन्ने कुरा केही हुँदैन । पार्टी दिशाविहीन हुन्छ । एक अर्थमा पार्टी प्राविधिक हुन्छ ।
पार्टी भनेको साझा लक्ष्य, उद्देश्यसहितको संगठन हो । साझा लक्ष्य, उद्देश्य केही नभएपछि अभियान पनि केही हुँदैन । पुग्नुपर्ने पनि कहीं हुँदैन । त्यसपछि इमान्दार कार्यकर्ताहरु पाखा लाग्छन् । गुट र आफ्नो नेतालाई देवत्वकरण गर्ने खेल सुरु हुन्छ ।
लगभग अलिअलि ओलीको देवत्वकरणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । जब देवत्वकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तब ज्ञान र विचार भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन । किनभने देवताले नजानेको केही हुँदैन । देवताको अगाडि अरु सबैले आर्शीवाद थाप्छन् । सामान्यतया कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो देवत्वकरण बेजोड छ नेपालमा ।
ज्ञानलाई बहिष्करण गरेपछि व्यक्ति नै केन्द्रमा हुन्छ । त्यहीं भएर ज्ञान सर्वथा अहिले अलपत्र पर्छ र यो प्रकरण अझ बढ्ने छ । यो झगडा केवल माधव–ओलीको मात्रै नभएर लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएका नेतृत्वको हो ।
र यस्तो झगडाले पार्टीलाई असैद्धान्तिक बाटोमा लैजान सहजीकरण गर्न सक्छ । अहिलेको पनि सिद्धान्तको बीउ कहाँ बाँकी थियो र ? भन्न सकिन्छ । तर कहीँ बीउ निस्कन्छ कि भनेर आशा गर्नेहरुका लागि यो झगडाले निराशामा लैजान सक्छ ।
कम्युनिस्टहरुसँग शब्दका अनेक खेल छन् । जनवादी केन्द्रीयता कम्युनिस्टको पुरानो शब्द हो । जनवादी केन्द्रीयताभित्र यथेष्ट बहसको ठाउँ हुन्छ । कार्यकर्ता, नेताले आश र त्रासबिना बहसमा भाग लिन्छन् ।
बहसमा भाग लिएबापत कुनै घाटा हुँदैन भन्ने कार्यकर्तालाई विश्वास हुन्छ र बहसमा भाग लिन्छन् । तर यस्तो जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास कम्युनिस्टको भाषणमा मात्रै सीमित हुने गरेको छ ।
यस्तो झगडाले पार्टीभित्र रचनात्मक र स्वस्थ बहसलाई ठाउँ दिँदैन र कम्युनिस्ट पार्टीलाई परम्परागत पण्डितहरुको थलो बनाउने सम्भावना रहन्छ । एउटा पण्डितलाई प्रत्येक वर्ष रुद्री लगाउन केही दुःख हुँदैन । उहीं किताब छ, उहीं विधि छ, उहीं प्रक्रिया छ । उसले कुनै दिमाग लगाउनु पर्दैन । तर कम्युनिस्ट भित्र समाजका नयाँ–नयाँ समस्या र अन्तरर्विरोधहरुलाई समाधान गर्ने वैचारिक तागत चाहिन्छ ।
यस्ता झगडाले वैचारिक तागत आउनै दिँदैन र कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको चाकरी गर्ने र नेतृत्वबाट केही पाइएला भनेर आशा गर्ने थलोमा रुपान्तरित हुन्छ । पार्टी वैचारिक हिसाबले जीवन्त बन्नेभन्दा निर्जीव बन्दै जान्छ र समाजका लागि काम नलाग्ने औजार बन्दछ । नेतृत्व र नेतृत्वका आसेपासेलाई मात्रै सहयोगी बन्दै जान्छ । यस्ता झगडाको सबैभन्दा ठूलो खतरा यहीं नै हो ।
यस्तो झगडाको बेला पार्टी वरिपरिका बौद्धिकहरुको ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्ता झगडालाई रचनात्मक तरिकाले सैद्धान्तिक बाटोमा लैजाने । तर बौद्धिकहरु पनि यो भूमिकालाई निर्वाह गर्न योग्य देखिदैनन् ।
किनभने बौद्धिकहरु पनि गुटका गोटी सावित हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा पहिला पार्टीको बौद्धिक, पार्टीभित्र गुटको बौद्धिक । गुटभित्र मुख्य नेताको बौद्धिक । बौद्धिकहरु यस्तो ढाँचामा ढलेका छन् । कुनै बौद्धिकको नाम लिनुपर्यो भने कुन पार्टीको बौद्धिक भन्ने प्रश्न आउँछ । पार्टीभित्र कुन नेताको बौद्धिक भन्ने प्रश्न आउँछ ।
यस कोणबाट बौद्धिकहरुले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । अर्थात् बौद्धिकता गुमाएर बुद्धिजीविको उपाधि पाएकाहरुबाट यो भूमिकाको आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
युवाहरु पनि गुटीय चक्रमा गजबसँग पेलिएका छन् । ओलीले अरिंगाल बन्न आह्वान गरेपछि त झन् सामाजिक संजालमा अरु नेतालाई गाली गरेर आफ्नो नेताको नजिक हुने प्रवृत्ति नै छ ।
तर आशा के गर्न सकिन्छ भने पार्टीका केही वैकल्पिक विचारका व्यक्ति, केही युवाहरुले यस्ता झगडाहरुलाई निरुत्साहित गरी सकारात्मक बहसमा लान योगदान गर्ने छन् । आशा झिनो हो तर आशा गर्ने ठाउँ यहीं नै हो ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ७, २०७६, १२:५६:००